कन्पनी दर्ता अनलाइन सेवाबारे अन्तक्र्रिया
प्रस, वीरगंज, १७ जेठ/ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहयोग र वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा आज कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ओसिआर अनलाइन सेवाबारे अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरेको छ । होटल मकालुमा आयोजित अन्तक्र्रियामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रमुख शड्ढर अर्यालले ५ महिनादेखि अनलाइन सेवा शुरु गरेको र हालसम्म अनलाइन सेवाको प्रयोग गरेर ८१ वटा कम्पनी दर्ता भएको बताए । उनले अनलाइन सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकार्दै राजधानी बाहिर अनलाइन सेवाबारे जानकारी दिनका लागि अन्तक्र्रिया आयोजना गरिएको बताए । अर्यालले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दैनिक ३५ वटा कम्पनी दर्ताका लागि आउने र वार्षिक करिब १० हजारको सङ्ख्यामा दर्ता हुने कम्पनीको फायलिङ प्रणाली प्रभावकारी पार्न नसकिएको स्विकार्दै सो समस्यालाई क्रमश: प्रक्रियागत रूपमा मिलाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले कम्पनी दर्ता गरेर लामो समयसम्म कम्पनी सुचारु नगर्नेहरूको दर्ता खारेजीतर्फ पनि अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनले हाल अनलाइन सेवाबाट भुक्तानी र हस्ताक्षर बाहेक सम्पूर्ण प्रक्रिया भइरहेकोले सेवाग्रहीलाई राजधा
एकजुट भएर निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत दिलाउन महामन्त्री सिंहको आग्रह
प्रस, वीरगंज, १७ जेठ/ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई परास्त गर्न नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । वीरगंज रानीसति अतिथि सदनमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री सिंहले आगामी संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत ल्याउन पार्टी एक ढिक्का हुन आवश्यक भएको बताए । नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकको दिशानिर्देश गर्ने पार्टी भएकोले सो जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि पनि संविधानसभामा काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिलाउन नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध कायकर्ताहरू एक ढिक्का भएर लागुपर्ने उनले बताए । कार्यकर्ता भेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका सभापति सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले नेपाली काङ्ग्रेसले २००७ सालदेखि आन्दोलनमार्फत् नेपाली जनतालाई मालिक बनाउने कार्य गर्दै आएको बताए । उनले काङ्ग्रेस हालसम्म मुक्तिदाताको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको दाबी पनि गरे । सभापति चौधरीले आगामी संविधानसभा निर्वाचनपछि सङ्घीयताको हकमा तराईलाई पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कार्यकर्ता भेलामा वीरगंज उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका वडा क
कृपाचार्य, कृपी र द्रोणाचार्य
- उमाशङ्कर द्विवेदी शुशरद्वान महर्षि गौतमका पुत्र थिए । उनी धनुर्वाणका साथ उत्पन्न भएका थिए । उनको मन जति धनुर्विद्यामा एक दिन संयोगवश राजा शान्तनु आफ्ना लावालश्करका साथ शिकार खेल्दै त्यहीं बाटो भएर जाँदै थिए । एउटा सेवकको नजर ती शिशुहरूमाथि पर्‍यो । बेवारिसे अवस्थामा रहेका ती बालक तथा कन्यालाई राजाले दैवीय प्रसादको रूपमा ग्रहण गरेर घर ल्याए । राजाले ती शिशुहरूको उचित पालनपोषण र यथोचित संस्कार गरे । शिशुहरूको कृप (बालक) तथा कृपी (बालिका) नामाकरण गरे । ऋषि शरद्वानले यो कुरा आफ्नो तपोबलले थाहा पाएर राजा शान्तनुको दरबारमा आई ती शिशुहरूको नाम–गोत्र आदिको परिचय गराए तथा राजाको दरबारमैं बसेर उनीहरूलाई सम्पूर्ण धनुर्विद्या, विविध शास्त्रहरू र त्यसका रहस्यहरूको शिक्षादीक्षाको समुचित व्यवस्था गरिदिए । केही समयमैं बालक कृप जम्मै विषयहरूको परमाचार्य भए तथा कृपबाट जनमानसमा कृपाचार्यको नामले सम्बोधित हुन थाले । अब उनी पाण्डव, कौरव तथा अन्य राजकुमारहरूका साथ धनुर्विद्याको अभ्यास गर्न थाले । समय बित्दै गएपछि भीष्म (शान्तनुका छोरा युवराज भीष्म)ले मनमा विचार गरे–कौरव र पाण्डवहरूले यसभन्दा बढी शिक
–श्रेयज सुवेदी १९ बर्से उमेरमा नै मनमा ६० बर्से कुरा खेल्छन् । सोच्दासोच्दै जीवन सिद्धिसक्दा पनि सोच्न छोड्दैन, अपराधी दिमाग । कहिले डरले थकाउँछ त कहिले घरले तर्साउँछ । वीरगंजको गर्मी पनि उखरमाउलै छ । अझ नयाँ मान्छेसित यो गर्मी अझ बढी सामीप्यताका कारण जबरजस्तीको पिरती गाँस्न खोज्छ । लोडसेडिङको कारण सिलिङमा तुन्रु· झुन्डिएको पङ्खा पनि गतिहीन छ । पसिनाले बगाएर खाटमुनि लान्छ भन्दैछ । लामखुट्टेका जमात कानमा आई पञ्चे बाजा बजाउँछन् । बाजा मात्र बजाए त हुन्थ्यो नि, शरीरभरि म्वाई खाएर हैरान पार्छन् । गर्मी र लामखुट्टेले आज मलाई कोठामा बस्न दिंदैन जस्तो छ । हस्तक्षेपी गर्मी र लामखुट्टेको भौतिक एवं मानसिक यातनाबाट बच्न कोठामा चाइनिज ताल्चा झुन्ड्याएर चप्पलभित्र खुट्टा पसाउँदै म कोठाबाट बाहिरिन्छु । रातको १२ बजेको छ । कुमारीमाई पछाडिको रानीघाट एरिया रातको एकान्तमा मस्त निद्रामा मग्न छ । रातको एकाग्रतामा मेरो आगमन सजिलै ठम्याउँदै गल्लीका कुकुरहरू साइरन बजाउन थाल्छन् । एउटाले भुक्न थालेपछि सारा कुकुर उसको भुकाइमा एकता थप्छन् र कुकुरको भुकाइ रातको मौनतामा टाणटाणसम्म छरपस्ट हुन्छ । नाम थाहा नभए
ब्राह्मणग्रन्थानम् वैज्ञानिक रहस्यम्–२
- सुशील मुडभरी गताड्ढको बाँकी अन्धविश्वासले ग्रसित हिन्दू समाजलाई वेदतर्फ उन्मुख भएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अभियान चलाउने दयानन्द सरस्वती चर्चित व्यक्तित्व हुन् । उनलाई उनका गुरु दण्डि स्वामी विरजानन्दले वेद सम्बन्ध आर्ष ग्रन्थ मात्र वास्तविक धार्मिक ग्रन्थ हुन्, धर्मका नाममा अलौकिक कुरा लेखिएका अनार्ष ग्रन्थहरू नदीमा बगाइदिए हुन्छ भनी गुरुमन्त्र दिएका थिए । उक्त गुरुमन्त्र दिएको १५० औं वर्षगाँठ पारेर ऐतिहासिक नगर मथुरामा आर्य समाजले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आर्य महासम्मेलन गरेको थियो । मथुरा योगेश्वर श्री कृष्णको जन्मभूमि, विरजानन्दको कर्मभूमि र दयानन्दको दीक्षाभूमि भएकोले पनि यी महापुरुषहरूको पावन भूमि र गौरवपूर्ण भूमि छानेर यो महासम्मेलन गरेको मानिन्छ । आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक ‘समर्पणम्’ भन्ने पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ– विराजनन्दले दयानन्दलाई गुरुकुलमा प्रवेश गर्नुअघि अनार्ष ग्रन्थ त्यागेर आर्ष ग्रन्थ ग्रहण गर्न आदेश दिनुभएको थियो । विरजानन्दकै प्रेरणाबाट दयानन्द सरस्वतीले आर्य समाज गठन गरेर जीवन त्यसमैं अर्पण गर्नुभएको थियो । उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ– आज विश्व मानव समाजमा उन्नतिको कुर
‘म घरवाली होइन, भाडावाली’
- सञ्जय साह ‘मित्र’ एउटा हिन्दी फिलिम घरवाली बाहरवाली प्रदर्शनमा आएको वर्षौं भयो तर त्यसले समाजमा आफ्नो जमानामा छोडेको छाप भने अझै प्रखर छ । घरवाली र बाहरवालीको चर्चा समाजमा पुरुषको हकमा मात्र भएको छ । महिलाले यसरी भन्न थालेको हो अर्थात् यस्तै अर्थ लाग्ने भन्न थाल्ने हो भने अनर्थ भएजस्तै हुन्छ । घरवाला र बाहरवालाको अवस्था समाजमा कसैको हुन नसक्ने होइन, पत्रिकाहरूमा कहिलेकाहीं पढ्न पाइन्छ । तर गाउँ–समाजमा फलानीको घरवाला फलानो र बाहरवाला फलानो हो भन्नु सबैभन्दा चरित्रहीन आइमाईको रूपमा सबैले भन्न थालिहाल्छन् । महिलाले महिलालाई पनि यहाँ अत्यधिक हेप्ने अवस्था आउन सक्छ तर पुरुषको हकमा कसैले फलानोको फलानी घरवाली र फलानी बाहरवाली हो भन्दा उतिसारो चरित्रहीन मान्ने अवस्था आउँदैन । तर बाहरवाली हुन्छ भने बाहरवाला किन हुँदैन ? पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा रहेको हाम्रो समाजमा कुनै महिलाले एकपटकमा दुई पति राख्न सक्दिनन् । यो सामाजिक तथा नैतिक मात्र नभई धार्मिक बन्धन पनि हो तर नेपालकै सम्भवत: शेर्पा समुदायमा केही वर्ष पहिलेसम्म यस किसिमको प्रथा चलनचल्तीमा रहेको थियो । अहिले यो हराएको देखिन्छ ।
शहरमा समवेदनाको स्थिति
- चन्द्रकिशोर बाराका पत्रकार विनोद प्याकुरेलको सडक दुर्घटनामा परि निधन भयो । जीवनमा कैयौंपटक दुर्घटनालाई छल्दै आएका उनलाई आखिर मृत्युले समायो । उनी बारा जिल्लाका पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षसमेत भइसकेका थिए । जितपुर क्षेत्रमा उनको विशेष चिनारी थियो । एउटा मिलनसार र सहज स्वभावका धनी थिए, उनी । केही गरौं भन्ने भावना उनको मनमा उर्लिरहन्थ्यो । पत्रकार वीरेन्द्र साह मरिंदाको बखत महासङ्घको नेतृत्वमा उनी नै थिए र उनले त्यतिखेर आन्दोलनलाई अगाडि पनि बढाएका थिए । उनीसँग यस क्षेत्रकै पत्रकारहरूको विशेष घुलमिल थियो, त्यसैेैले उनको अन्तिम बिदाइमा मकवानपुर, पर्सा र बाराका पत्रकारहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव गाउँलेसमेत उपस्थित थिए । जीतपुरको व्यस्त सडकमा एउटा टाटा सुमोको ठक्करबाट सख्त घाइते भएका उनको उपचारको चाँजोपाँजो मिलाउने क्रममैं देहान्त भयो । साथीहरूबाट अचानक बिदा हुन पुगेका विनोदको अनुपस्थितिले अनेकौंलाई रुवायो । यतिखेर समवेदना प्रकट गर्ने एउटा प्रभावकारी माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएको छ । मानिसहरू आफ्ना दु:ख, पीडा, उकुसमुकुस, असहमति वा सुखद अनुभूतिसमेत समाजिक
मुसाको प्रवेशले घर बलियो हुँदैन
- बैद्यनाथ ठाकुर कुनै पनि बलियो घरलाई कमजोर बनाउनु छ भने त्यसमा मुसा लगेर छोड्नुपर्छ । मुसाहरूको प्रवेशले कहिले पनि कुनै घर बलियो हुन सक्दैन किनभने मुसाले जहिले पनि काट्ने कार्य मात्र गर्दछ । सि·ो चीजलाई टुक्राटुक्रा पार्नुछ भने मुसाको उपस्थिति गराउनुपर्छ त्यसपछि त्यहाँ भएको सारा चीज जो मुसाको कामको छ त्यो पनि जो कामको छैन त्यो पनि सबैलाई उसले काटेर बर्बाद गरिदिन्छ । नेपाली राजनीतिमा विगत लामो समयदेखि मुसाहरूको रजाइँ हुँदै आएको इतिहास छ । चाहे त्यो सामन्तीतन्त्रका परिचायक राजतन्त्र होस् वा बुर्जुवाहरूको गढ नेपाली काङ्ग्रेस होस् अथवा दक्षिणपन्थी वामपन्थीको बलियो किल्ला नेकपा एमाले नै किन नहोस् । यी सबैले मुसाको पीडा विगतमा भोगिसकेको छ । नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहे राजावादी पार्टी होस् वा तथाकथित प्रजातन्त्रवादी पार्टीहरू वा वामपन्थी पार्टीहरू नै किन नहोस् यिनीहरू सबैको समान पीडा भनेको पार्टीभित्र समयसमयमा मौलाउने गरेको अवसरवादरूपी मुसा नै हो । वास्तवमा अवसरवाद वनमारा झारझैं हुन्छ, जसले हेर्दाहेर्दै सारा ज·ललाई ध्वस्त गरिदिन्छ । यतिखेर नेपाली राजनीति इतिहासकै सबैभन्दा
यस्तै तदारुकता चाहिन्छ
अपराध वा भ्रष्टाचार बढ्नुमा कारबाईको अभाव त मूल कारण हो नै, पीडित वा सरोकारवाला पक्षले वास्ता नगरिदिंदा पनि हो । भ्रष्टाचार चारैतिर व्याप्त छ, तर सोधीखोजी र निगरानी नराख्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्ने र सामान्य नागरिकले दु:ख पाउने अवस्थाले गर्दा देशमा सुशासनको अकाल परेको र लोकतन्त्र निस्सासिन पुगेको जोकसैले अनुभूत गरेको कुरा हो । सार्वजनिक जग्गाहरू, मठ मन्दिरका जग्गाहरू बलजबर्जस्ती अतिक्रमण भइरहेको हुन्छ, सरोकारवाला पक्षले वास्ता गर्दैन । अदालतको फैसलाबाट तेरोमेरो विवाद समाप्त भइसकेको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले काम नगरिदिंदा न्यायको अनुभूति हुन छाडेको छ । यी र यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, जसले नेपालको उन्नति र नागरिकको अधिकारमाथि बन्देज लगाएको छ । घूस नखाई नियुक्ति नदिने, अनियमितता देखेर पनि वास्ता नगरिदिने, उजुरी गर्दा कारबाई नगरिदिनेजस्तो शून्य क्रियाशीलता देशमा बढ्दै जाँदा कसको भलो हुन्छ ? केही मुठ्ठीभर मानिसलाई सुख होला, समग्र समाजको कुनै पनि अवस्थामा भलो हुन सक्दैन । यस्तो बेला एउटा सुखद समाचारको प्रत्यक्षीकरण भएको छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबारे स्थानीयदेखि सबै सञ्चारमाध्
नाउक्षे अस्पताल विकास समितिका ८ कर्मचारीलाई अख्तियारको पत्र
प्रस, वीरगंज, १६ जेठ/ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिले गैरकानुनी तरिकाबाट नियुक्त गरेको ५४ जनामध्ये ८ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाजिर हुन पत्र काटेको छ । अख्तियारले विकास समितिका दुर्गादेवी जयसवाल, कृष्णप्रसाद, विष्णु यादव, सुवास साह, कुलदीप मलाहा, राजधनीप्रसाद यादव, फूलकुमारी साह, सोनी कुमारीलाई हाजिर हुन पत्र काटेको हो । अस्पतालका तत्कालिन मेसु अखिलेश सिंह र विकास समितीका अध्यक्ष बाबूलाल यादवको मिलोमतोमा विकास समितिको म्यानुट बुक सच्याएर दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी नियुक्त गरेको घटनामा समितिका सदस्य जिप्रका पर्साका प्रतिनिधि सप्रजिअ लुकबहादुर क्षत्री र जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी स्वयंले अख्तियारमा उजुरी दिएको घटनामा अख्तियारले तत्कालीन मेसु अखिलेश सिंह, विकास समितिका अध्यक्ष यादव र सदस्यद्वय रेखा घिमिरे तथा राधेश्याम सोनीलाई तारेखमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दामा अहिले विकास समितिका तर्फबाट नियुक्ति पाएकामध्ये ८ जनालाई अख्तियारमा हाजिर हुन पत्र काटिएको हो । विकास समितिले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीको आवश्यकता नै नरहेको सन्दर्भमा समितिका सदस्यहर
महिलाहरूको अधिकारको लागि हस्क्षेप आवश्यक : हिसिला यमी
प्रस, वीरगंज, १६ जेठ/ एमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य एवं महिला फाट इन्चार्ज हिसिला यमीले महिलाहरूलाई आफ्नो अधिकारको लागि राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूमा हस्तक्षेप गर्ने निर्देशन दिएकी छन् । अखिल नेपाल महिला सङ्घ भोजपुरा राज्य समितिले वीरगंजको लायन्स सभा हलमा आयोजित मधेस महिला हिंसा र त्यसविरुद्ध अभियानमा देखा परेको चुनौती विषयक एक दिने अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महिला नेत्री यमीले महिलाहरूको सहभागिता सत्ता, श्रम, शरीर र राजनीतिमा समान हुनुपर्ने बताइन् । उनले मधेसमा अहिले पनि महिलाहरू पहाडको तुलना अपहेलित अवस्थामा रहेको बताइन् । मधेसी महिलाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित भएका कारण घरेलु हिंसाको शिकार हुँदै आएको बताइन् । उनले मधेसी महिलाहरूमा जागरणको आवश्यकता रहेको पनि बताइन् । उनले घरेलु कामसँगै महिलाहरू राजनीतिमा पनि सक्रियरूपमा आगाडि बढेको खण्डमा हकअधिकार पाउनुबाट वञ्चित नहुने बताइन् । अधिकारको लागि पनि राजनीतिमा मधेसी महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो । नेत्री यमीले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा महिला हकअधिकार सुनिश्चितताको ला
पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग (१४)– के भारत आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्नेछ ?
- विश्वराज अधिकारी सन् २०५० सम्म भारत विश्वकै सर्वाधिक धनी राष्ट्र हुनेछ । भारतले आर्थिक क्षेत्रमा अगुवाइ गर्नेछ र विश्वमैं आर्थिक महाशक्ति हुनेछ । यस्तो अनुमान आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले मात्र होइन, राजनैतिक पण्डितहरू पनि गरिरहेका छन् । त्यस्तो अनुमान गर्नेहरूमा विकसित देशका अर्थशास्त्रीहरूसमेत छन् । सन् १९८० पछि भारतमा जुन किसिमले आर्थिक जागरण आरम्भ भयो, त्यहाँका प्रभावशाली व्यक्ति मात्र होइन, सरकार समेतले आर्थिक सुधार (उदार अर्थनीति, निजीकरण, खुलाबजार) को कार्यक्रममा जोड दियो, त्यसले सुस्त गतिको भारतको अर्थ व्यवस्थालाई दौडायो र प्रतिस्पर्धात्मक तुल्यायो । एक किसिमले भन्ने हो भने भारतीय अर्थ व्यवस्था प्रतिस्पर्धाको अग्रपङ्क्तिमा रहेका राष्ट्रहरूको हाराहारीमा पुग्यो । अब सबै प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर एक नम्बरमा पुग्ने कसरत गर्दैछ । स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको सपना ‘समाजवाद’ ले निरन्तरता पाएको भए भारतीय अर्थव्यवस्था अहिले पनि कछुवाको चालमा घस्रिरहेको हुन्थ्यो । मुलुकमा समाजवादको विकास गर्ने नेहरूको सपनाले केवल उनको समयमा मात्र कार्य गरेन, पछिका प्रधानमन्त
बित्तीय अनुशासन कायम राख्न कार्यविधि
- शीतल महतो जनप्रतिनिधिविहीनता र कानुन कार्यान्वयनको अभावमा बढ्दो अराजकता र अनियमितताका कारण स्थानीय निकायहरूमा यतिखेर मनपरीतन्त्र हावी भएको छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्वाचित निकायको अभावमा स्थानीय निकाय लथालि· र भद्रगोल देखिएको छ । स्थानीय निकाय सबल, सक्षम र पारदर्शी हुन नसक्दा लोकतन्त्रका लाभहरू आम नागरिकले सहजरूपमा पाउन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको शक्ति, स्रोत र साधनको उपयोगमा अधिकाधिक मात्रामा जनताको निर्णायक सहभागिताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । राज्यको शक्ति केन्द्र सरकारमा रहने भएकोले स्थानीय प्रकृतिको अधिकार स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण नगर्ने हो भने बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र स्थानीय स्वशासनको जग बलियो हुन सक्दैन । लोकतन्त्र नभएको मुलुकमा शक्ति विकेन्द्रीकरण हुँदैन भने अधिकार विकेन्द्रीकरण नभए स्वशासन पनि हुन सक्दैन । स्वशासनको अभावमा दिगो विकास सम्भव हुन सक्दैन र दिगो विकास नभएसम्म लोकतन्त्रका लाभहरू आम जनताले उपभोग गर्न पाउँदैन । स्थानीय जनताको सम्मति अनुकूल बहुलवादमा आधारित प्रणालीको संस्थागत विकास गर्दै स्थानीय जनजीवनलाई जनताकै सहभाग
आर्थिक समृद्धि र सामाजिक सद्भावको लागि मेलमिलाप आवश्यक
- वीरेन्द्रकुमार यादव केही वर्ष पहिले एउटा हुनेखाने परिवार सँगै बस्दै प्रगति गर्दै आएकोमा परिवारिक सङ्ख्या वृद्धि हुँदा अलग अलग बस्ने सहमति गरी आआफ्नो अंश लिनेदिने गरी मिलापत्र गरे । अंशजस्तो जटिल विषयमा सहमतिले समाधान गर्दा परिवारमा निकै सद्भाव थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर अंशबन्डा लगत्तै त्यहाँ अनेक खिचौला उत्पन्न भयो । सात–आठ कित्त मुद्दा दर्ता भयो । मुद्दाहरू दुई वर्षभन्दा बढी समय विचाराधीन रह्यो । मुद्दाले परिवारभित्र यस्तो दूरी बढायो कि सहोदर दाजुभाइको घरमा मरणहरण र विवाह चाड–पर्वमा समेत बोलचाल रहेन । पानी पँधेरोमा बन्देज लाग्यो । तारेखको दिन शिक्षक–प्राध्यापकजस्ता व्यक्ति बिदा लिएर अदालत धाए । आपसमा झैझगडा र मारपिटसम्मको मनस्थिति देखियो । यसले पदीय मान प्रतिष्ठा पनि जोगिएन । मुद्दाको दस्तुर र वकालत फिसमा कमाइ खर्च भइरहेको थियो । नेपाली समाज विशेषगरी तराईमा विकास नहुनु र सामाजिक एकताको कडी कमजोर हुनुको एउटा कारण मुद्दा–मामिला पनि हो । सामान्य विवादलाई स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप गराइदिने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव पनि हो । यसले न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न मुश्किल पा
गणतन्त्र व्यवस्थापनमा दलहरूको भूमिका
- प्रकाश उपाध्याय मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको ५ वर्ष पूरा भएको छ । तर गणतन्त्रको व्यवस्थीकरणमा दलीय अकर्मण्यता बाधाको रूपमा उभिनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति विडम्बना बनेको छ । संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गर्दा जुन अपेक्षा र आशा पलाएको थियो, त्यसमा तुषारापात त भएको नै छ, उत्पन्न सड्ढट समाधानमा पनि दलीय नेतृत्व असफल साबित भइसकेको छ । संविधानसभाको चार वर्षे कालखण्डमा देखिएको सत्ता–रडाँको र त्यसपछिको एक वर्षे समयमा दलहरूले देखाएको राजनीतिक रमिताले यस कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ । चुनावी सरकारको नाममा सत्ता सञ्चालनको जिम्मा पाएको कर्मचारी संयन्त्रले दलहरूको असफलता प्रस्ट भएको छ । लोकतन्त्रका सारथी मानिएका दलहरूकै स्वार्थी बखेडाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ग्रहण लागेको विषय अब नयाँ रहेन । दलहरू जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल हुनु र राजनीतिक तथा संवैधानिक गत्यावरोध निकासका लागि लोकतान्त्रिक मान्यता र विधिइतर उपाय स्विकारिनु लज्जास्पद हो । तर यही असहजताबाट समाधान खोज्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने दलहरूकै बखेडामा निकासको मार्ग अवरुद्ध भइरहेको छ । दोषारोपण र निषेधको आचरणबीच चुनावको वातावरण बन्
दलहरू नै बाधक
- श्रीमन्नारायण मिश्र असार महिनाभित्र चुनाव गराउने उद्देश्यका साथ गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले असारमा निर्वाचन नगराउने निश्चित भइसकेको छ । चार राजनीतिक शक्तिहरूले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पँदा सकभर असारभित्रै चुनाव गराउने, काबु बाहिरको परिस्थिति आएमा मात्र मङ्सिरमा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा मङ्सिरमा पनि चुनाव सम्पन्न हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । चुनावको मिति घोषणा गर्नमा विलम्ब हुनुको मुख्य कारण सरकारको ढुलमुल रवैया र राजनीतिक दलहरूको शर्त हनुमानजीको पुच्छर जस्तै लम्ंिबदै जानु हो । चुनावको मिति घोषणा गर्नुमा विलम्ब हुनुको मुख्य कारण दलहरूकै गैरजिम्मेवार भूमिका हो । निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच बढेको विवादका कारण नै बढी समस्या उत्पन्न भएको हो । निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रको आधारमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरिसकेको हो । मधेसवादी दलहरूले सबै बालिग नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरुन्जेल मतदाता परिचयपत्र लागू गर्नु उचित नहुने अडान राख्दै आएको छन् । नेपाल सरकारले यस दि
आस्था बढ्ने काम
नेपाल प्रहरीले भारतका कुख्यात अपराधी र भारत प्रहरीको मोस्ट वान्टेड बब्लु दुबे अथाृत् मिथिलेश मिश्रालाई पक्राउ गरेर लामो समयपछि प्रहरी हुनुको सन्देश दिन सफल भएको छ । खासगरी वीरगंजमा कार्यालय रहेको नारायणी प्रहरीले पक्राउ गरेको हुँदा वीरगंजलाई अझ बढी गर्व हुनु पनि स्वाभाविक भएको छ । भारतबाट फरार भएर वीरगंजलाई कार्यक्षेत्र बनाई अपराधकर्म गर्दै आएको बब्लु पक्राउ हुनु यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि उसको स·तले यहाँ पनि अपराधकर्मी फस्टाउने बढी सम्भावना थियो । प्राय: नेपालमा अपराधवृत्ति वृद्धि हुनुमा छिमेकी मुलुकका धुरन्धर अपराधीहरूको स·तले हो भन्ने कुरा पहिले नै स्थापित भइसकेको तथ्य हो । पहिले पनि भारतका अपराधी लुक्ने र आफ्नो सङ्क्रमणकालमा यहाँका मानिसको सहयोग लिएर अपराधकर्म गर्ने गरेका हुन् । यसबाट नेपालीहरूले विभिन्न हतियार प्राप्त गर्ने अवसर र धुरन्धर अपराधीहरूको कार्यशैली सिक्ने मौका पाएका हुन् । बितेको केही वर्ष पहिले नेपालमा भारतीय अपराधीहरूको र·दारीको बिगबिगी भएको बेला यही तथ्य उजागर भएको थियो । जसरी एकजना राम्रो मान्छेले आफ्ना स·तमा परेको व्यक्तिलाई राम्रो काम र विचार सम्प्
छैटौं गणतन्त्र दिवस सम्पन्न
प्रस, वीरगंज, १५ जेठ/ छैटौं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज जिविस पर्सामा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पर्साका प्रजिअ कैलाशकुमार बजिमयले अनुशासन, कर्तव्य र अधिकार बुझेको खण्डमा मात्र गणतन्त्र स्थापना हुने बताए । उनले कर्तव्यभन्दा बढी अधिकार खोज्ने प्रवृत्ति नेपालीमा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । प्रजिअले राज्यले दिएको सीमित स्रोतसाधनबाट कर्मचारीहरूले गणतन्त्र स्थापनाका लागि कार्य गरिरहेका बताए । सो अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका सभापति सुरेन्द्र चौधरीले गणतन्त्र प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भ भएको बताए । उनले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न विदेशीभन्दा पनि नेपालीको भूमिकालाई महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिए । एमाओवादी पर्साका इन्चार्ज क्षेत्रबहादुर श्रेष्ठले गणतन्त्रको लागि सम्पूर्ण नेपाली एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले यसका लागि बहस आवश्यक भएको पनि बताए । कार्यक्रम जिविस पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी गजेन्द्र ठाकुरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र वप्रउ नगेन्द्र थापा, प्रउ पीताम्बर अधिकारी, वीउमनपाका कार्यकारी
कुख्यात भारतीय अपराधी बब्लु दुबे पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १५ जेठ/ अञ्चल प्रहरी कार्यालय वीरगंजका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको कमान्डमा रहेको प्रहरी टोलीले नेपालमा रहेर आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका भारतमा खोजी सूचीमा रहेका अभियुक्त बब्लु दुबेलाई पक्राउ काठमाडौंको सीतापाइलामा लुकेर बसेका दुबेलाई गएराति पक्राउ गरी वीरगंज ल्याएको अञ्चल प्रहरी कार्यालय वीरगंजले जनाएको छ । अञ्चल प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी ३० वर्षीय बब्लु दुबे भारत पूर्वी चम्पारण मोतिहारी निवासी भएको र उनी भारतमा विभिन्न हत्या र बैंक लुटपाटको घटनामा दोषी ठहर भई १० वर्ष सजाय पाएका अपराधी भएको जनाएको छ । दुबेले जेलमा रहँदा बिहार पिपुल्स लिब्रेसन आर्मीको नाममा आपराधिक समूह खडा गरी हालसम्म ३० जना व्यक्तिको हत्या गरेको र करोडौं भारतीय रुपैयाँ र·दारी असुल गरेको प्रहरीले दाबी गरेको छ । वप्रउ खनालले दुबेले ६ जनाको मात्र आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरेका पत्रकार सम्मेलनमा बताए । दुबेले यही जेठ ४ गते भारत आमोदेईमा रहेको इँटाभट्टाका मालिक हाफिज मियाँका सुरक्षागार्ड ज·बहादुरमाथि गोली प्रहार गराएका थिए । ५ लाख रुपैयाँ फिरौती नदिएको
जुनियर च्याम्पियनशिप २०७० को लागि खेलाडी छनौट
प्रस, वीरगंज, १५ जेठ/ यही जेठ २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने प्रथम राष्ट्रिय विद्यालय खेलकुद जुनियर च्याम्पियनशिप २०७० मा पर्सा जिल्लाबाट निजी विद्यालयहरूको सहभागिताका लागि छनोट कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ । नारायणी र·शालामा सम्पन्न छनोट कार्यक्रममा एथलेटिक्सतर्फ १००, ४ सय, १५ सय र ३ हजार मिटरमा पुरुषतर्फ गौतम माविका आनन्द जयसवाल, गौरव कुशवाहा, सुशान्त चौधरी र दीपेश जयसवाल छनोट भएका छन् । यसैगरी महिलातर्फ ४ सय मिटर रिले दौडमा गौतम माविकै रोशनी झा छनोटमा भएकी छिन् । एथलेटिक्सतर्फ २ सय मिटरमा माउन्ट हर्मन स्कूलका सुनीलकुमार दास, महिलातर्फ २ सय र ४ सय मिटरमा मजिना खातुन छनोट भएकी छिन् । त्यस्तै सय मिटर दौडमा जीएचपीकी राशिका भट्ट, ८ सय मिटरमा विद्यासदनकी मीरा साह र जीएचपीका आदित्य साक्य तथा १५ सय मिटरमा विद्यासदनका सुमन यादव र ३ हजार मिटरमा विद्यासदनकी भारती गुप्ता छनोटमा परेका छन् । यसैगरी आज सम्पन्न क्रिकेट प्रतियोगितामा गौतम माविलाई हराउँदै विद्यासदन छनोटमा परेको छ । छनोट भएका विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र विद्यालय खेलकुद विकास बोर्डको तत्वा
दलहरूको गाउँ दौडाहाप्रति समाजको अनाकर्षण
- सञ्जय साह ‘मित्र’ हाम्रो समाजको प्रवृत्ति नयाँ शक्तिलाई पत्याउने रहेको छ । विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले पञ्चायतपछि प्रचण्ड बहुमत ल्याएको थियो । यसपछि मध्यावधि निर्वाचनबाट एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दलको बहुमत प्राप्त भएको थियो । बहुमतले सरकार नबने पनि अल्पमतको सरकारले एमालेको पहिचान बनाउन सकेको थियो । यस अवधिको कमाइ एमालेले अहिले पनि खाइरहेको छ । एमालेले यसै अवधिलाई स्वर्ण समय मानेको देखिन्छ । काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेपछि नेपाली जनताको आशाको केन्द्र एमाओवादी बनेको थियो । एमाओवादीले पनि एमालेजस्तै चुनावमा बहुमतको हैन अल्पमतको सरकार बनाउने र केही समय चलाउने मौका पायो । दुर्भाग्य के भयो भने एमाओवादीलाई काङ्ग्रेस र एमालेले एकपटक मात्र भए पनि बजेट ल्याउन दिएन । एमाओवादीलाई आरम्भदेखि बदनाम बनाउने काममा एमाले र काङ्ग्रेस लागिरहयो । यस यथार्थले सबैभन्दा बढी घाटा अहिलेसम्म एमालेलाई नै भएको देखिएको छ । एमालेका केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताहरूले मरेको भैंसीलाई जुम्राले छोडेजस्तै कार्यकर्ताहरू धमाधम एमाले परित्याग गर्दैछन् । राजनीतिक अवस्थाको हालत निर्दलीय सरकारले गर
अचानोमा गाविस सचिव
सरकारले चुनावलाई लक्षित गरी घरदैलोमा नागरिकता टोली खटाइरहेको बेला गाविस सचिवहरूले नागरिकतासम्बन्धी सिफारिस बन्द गरेका छन् । नागरिकताको सिफारिस गर्दा झूटो विवरणमा सिफारिस गरेको भन्दै गाविस सचिवहरूलाई प्रशासनिक कारबाई शुरू भएपछि गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले ‘सिफारिस नगर्ने’ राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि बहाल रहँदा नागरिकतासम्बन्धी कागजातमा गाविस अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले सिफारिस गर्थे । स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन भएपछि गाविसबाट गरिने सिफारिससम्बन्धी सम्पूर्ण काम गाविस सचिवले गर्दै आएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि र गाविस सचिवको नितान्त फरक जिम्मेवारीहरू छन् । तर सरकारले राजनीतिक जिम्मेवारीसमेत गाविस सचिवको काँधमा थोपरेपछि समस्या भएको छ । स्थानीयसँग चिनजान, घुलमिल र विश्वसनीयता भएका व्यक्तिले नै चुनाव जित्ने हो । गाविसस्तरमा चुनाव जितेका नेताले आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्राय: बासिन्दालाई चिनेका हुन्छन् । विवरण थाहा पाउन नसकेमा आफ्ना कार्यकर्ता वा स्थानीय सञ्जालमार्फत् पनि उनीहरूले यथार्थ पत्ता लगाउन सक्छन् । स्थानीय निकायका अध्यक्ष, उपाध्
यथास्थितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने मजफो अध्यक्ष यादवको दाबी
प्रस, वीरगंज, १४ जेठ/ मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यथास्थितिमा मङ्सिरमा निर्वाचन हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । स्थानीय होटल सूरजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले निर्वाचन सम्बन्धी तयारी नभएको कारण चुनाव हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले नागरिकता समस्या, मतदाता नामावली, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको निर्माण भई नसकेको अवस्थामा मङ्सिरमा पनि निर्वाचनको सम्भावना न्यून भएको बताए । अध्यक्ष यादवले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएकोले चुनावप्रति माहौल सृजना हुन नसकेको बताउँदै प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा फोरम नेपाल नजाने बताए । अध्यक्ष यादवले फोरम नेपालसँगै नेकपा माओवादी पनि संयन्त्रको सदस्य नहुने जानकारी गराए । उनले संयन्त्रको औचित्य नरहेको समेत बताए । उनले निर्वाचनको लागि बृहत् राजनीतिक सम्मेलन गरी सबै दलको सहभागितामा निर्वाचन गराउने प्रयास भए राजनीतिक मतभेद समाधान हुने बताए । बृहत् राजनीतिक सम्मेलनबाट मात्र संविधानसभाको पूर्वाधार तयार हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले लोकतन्त्
गाविस सचिवहरूले नागरिकता सिफारिस बन्द गरे
प्रस, वीरगंज, १४ जेठ/ गाविस हकहित संरक्षण केन्द्र पर्साले आजकै मितिबाट केन्द्रीय आह्वान अनुरूप नागरिकता सिफारिसको काम बन्द गरेको बताएको छ । केन्द्रका सचिव राजेश्वरप्रसाद तेलीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले यही जेठ १२ गतेदेखि नागरिकता सम्बन्धी सिफारिस बन्द गरी सरकारलाई विज्ञप्तिमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइसकेको हुँदा पर्सा जिल्लामा पनि सो सम्बन्धी निर्णय आजदेखि कार्यान्वयन गरिएको जनाएका छन् । उनले गत साता कपिलवस्तु, सप्तरी, नवलपरासी, सिरहा, सर्लाहीलगायत जिल्लाहरूमा भएका नागरिकता सम्बन्धी घटनामा गाविस सचिवलाई मुद्दा लगाएर अमानवीय तरिकाले थुनामा राख्ने, मानसिक यातना दिने गरिएकोले पुन: आन्दोलनमा होमिनु परेको प्रस्ट्याएका छन् । नचिनेको व्यक्तिलाई चिन्दछु भनी सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नहटाउन्जेल सिफारिस गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धी कार्य बन्द गरिएको सचिव तेलीले बताए । उनले केन्द्रले अघि सारेको सो सम्बन्धी मागहरू पूरा नहुन्जेल नागरिकता सम्बन्धी सिफारिस गर्न नसकिने जनाएका छन् ।